Mon, Jul 6, 2020 at 5:21am
दोस्रो विश्वयुद्ध समेत लडेका वरिष्ठ कलाकार भीमबहादुर थापाको निधन
काठमाडौं,३० जेठ वरिष्ठ कलाकार भीम बहादुर थापाको निधन भएको छ । ९२ वर्षको उमेरमा बुधबार बिहान दुई बजेतिर उनको निधन भएको हो । उनको बुधबार नै दिउँसो पशुपति आर्यघाटमा थापाको अन्त्येष्टि गरीने बताइएकाे छ । वि.सं. १९८३ असार १३ गते खोटाङमा जन्मिएका थापाले झण्डै एक सयवटा चलचित्र र टेलीचलचित्रमा अभिनय गरेका छन् । थापा ब्रिटिश आर्मीमा भर्ना भएर दोस्रो विश्वयुद्धमा लडाईं समेत..
बिग बसले मेरो यौनिकतालाई एडिटिङ गरेर लेस्बियन झैं देखाइदियो : आश्का गोराडिया
एजेन्सी, २९ जेठ टेलिभिजन नायिका आश्का गोराडियाले ‘बिग बोस’ ले उनको यौनिकतालाई एडिटिङ गरेर गलत तरिकाले देखाइदिएको आरोप लगाएकी छिन् । उनले भनिन्, ‘बिग बोसमा मेरो यौनिकतालाई गलत तरिकाले देखाइयो । कार्यक्रममा यस्तो तरिकाले इडिटिङ गरियो कि मलाई लेस्बियनझैं प्रस्तुत गरियो । ’ जसका कारण आफू आमाबुवासामू लज्जित हुनुपरेको आश्काले बताइन् । उनका अनुसार उनको साथीलाई एलर्जीको समस्या थियो त्यसकारण उनले साथीको शरिरमा बाम..
गीतकार राजु थापाको गीति एल्बम ‘शब्द ब्यारेक’ अब बजारमा
काठमाडौँ, २९ जेठ भारतीय सेनामा कार्यरत गीतकार राजु थापाको गीति एल्बम ‘शब्द ब्यारेक’ बजारमा आएको छ । पन्ध्र वर्षदेखि गीत सिर्जनामा रमाउँदै आएका थापाको उक्त एल्बममा ‘यो साल पनि’, ‘कुवाको पानी’, ‘तिम्रो बिहे’, सधैँ हतार’, ‘अ‍ैले त अल्लारे’, ‘आमा’, ‘नटाढिनु है’, ‘सुख दिन नसकेनी’, ‘हैरान पार्ने’, ‘धनको गरीब भए पनि’ जस्ता १० वटा गीत समावेश छन् । पर्फर्मिङ आर्ट क्रियशन प्रालिले सार्वजनिक गरेको..
एक रातको रेट सोध्नेलाई मोडल सोफिया हयातले दिईन् यस्तो जवाफ .....
एजेन्सी, २८ जेठ विवादास्पद भारतीय टिभी रियालिटी शो ‘बिग बोस’ बाट चर्चामा आएकी मोडल सोफिया हयातले एक ट्रोलरलाई कडा जवाफ फर्काएकी छन् । ट्रोलरले उनलाई एक रातको रेट सोधेका थिए । ती व्यक्तिसँग भएको च्याटको स्क्रिनसट सोफिया आफैंले सेयर गरेकी छन् । अविद हुसैन नामका व्यक्तिले उनलाई विनम्रतापूर्वक सोधेका छन्, ‘तपाईंलाई एक रातका लागि बुकिङ गर्न मैले कति तिर्नुपर्छ होला ?’ यो प्रश्नबाट..
कुन-कुन बलिउड सुन्दरीहरुको विदेशी ब्वाइफ्रेन्ड छन् ? थाहा पाउनुहोस् !
एजेन्सी, २७ जेठ बलिउड नायिका प्रियंका चोपडा र हलिउड गायक तथा अभिनेता निक जोनसबीचको प्रेमसम्बन्धलाई लिएर निकै चर्चा हुने गर्छ । यी दुईलाई सञ्चारमाध्यमले धेरैपटक एकै ठाउँमा भेटाएका छन् । यति मात्र होइन, सामाजिक सञ्जालमा एकले अर्कोलाई गर्ने कमेन्टले पनि अफेयरको खबरलाई सत्य प्रमाणित गरिरहेको भारतीय मिडियाको दाबी हुने गर्छ । तर, पनि अहिलेसम्म मिडियाका अगाडि उनीहरूले सम्बन्धलाई स्विकारेका छैनन् ।..
बलिउड अभिनेत्री जसलाई बिकिनीमा सुन्दरभन्दा बढी भद्दा देखिन्छ
एजेन्सी. २५ जेठ बलिउडमा अभिनेता आफ्नो सिक्स प्याक देखाउने दौडमा हुन्छन् भने अभिनेत्री बिकिनी सिन दिएर चर्चा कमाउने तरिका अपनाउँछन् । तर, यहाँ बलिउडका ती अभिनेत्रीबारे चर्चा गरिँदै छ, जसलाई बिकिनीमा सुन्दरभन्दा बढी भद्दा देखिन्छ । श्रीदेवी बलिउडकी चाँदनी मानिने श्रीदेवी पनि बिकिनी सिन नरुचाउने नायिकामा पर्थिन् । १९८० को दशकमा उनी बिकिनी सिनमा देखिएकी थिइन् । तर, उनका फ्यानहरूले त्यति रुचाएनन्, जति साधारण..
टाइगर श्राफसँगको प्रेम अस्विकार गर्दै दिशा पटानीले पत्रकारमाथि नै अनेक आक्षेप लगाएपछि .....
एजेन्सी, २४ जेठ बलिउड अभिनेता टाइगर श्राफ र अभिनेत्री दिशा पटानीको प्रेमका विषयमा भारतमा बच्चा-बच्चालाई थाहा छ । उनीहरु कयौंपटक रोमान्समा लिप्त भएको अवस्थामा भेटिएका छन् । तर, दिशा ढोंग गर्न सिपालु रहिछन् । उनले एक अन्तरवार्तामा आफूहरु राम्रो साथी मात्र रहेको र प्रेम नरहेको दावी गर्दै मिडियामाथि नै अनेक आक्षेप लगाइन् । ‘पत्रकारको पेटमा किन लात्ती हान्नु भनेर’ अहिलेसम्म आफूहरुले यो..
४३ वर्षीय हलिउड अभिनेत्री एन्जेलिना जोलीबारे रोचक तीन प्रसंगहरु !
एजेन्सी, २३ जेठ हलिउडकी सुन्दर अभिनेत्री एन्जेलिना जोलीले ४ जुनमा आफनो ४३औँ जन्मदिन मनाइन् । एन्जेलिनाको सुन्दरताबाट अधिकांश प्रभावित हुने गर्छन् । उनका बारे फ्यानहरू विशेष चासो राख्ने गर्छन् । जन्मदिनका अवसरमा एन्जेलिनाको जीवनसँग जोडिएका केही रोचक किस्साहरू : प्रसंग १ एन्जेलिना जोली बचपनदेखि नै जिद्दी स्वभावकी थिइन् । त्यो बानी ठूलो भएपछि पनि बदलिएन । उनले आफ्नो जीवन जसरी चाहन्थिन्, त्यसैगरी बाँच्दै..
मरणासन्न हुने गरी गर्लफ्रेन्डलाई पिटेर बलिउड अभिनेता अरमान कोहली फरार, प्रेमिकाको भने उपचार जारी
एजेन्सी, २२ जेठ बलिउड अभिनेता अरमान कोहलीमाथि कुटपिट र धम्की दिएको आरोप लागेको छ । उनीमाथि यो आरोप उनको प्रेमिकाले लगाएकी हुन् । मुम्बईको शान्ताक्रुज पुलिस स्टेशनमा उनको प्रेमिकाले कोहलीविरुद्ध उजुरी दर्ता गरेकी हुन् । यो घटनापछि कोहली फरार छन् । प्रहरीकाअनुसार आइतबार साँझ साढे ५ बजेको आसपास अरमान र उनकी प्रेमिकाबीच पैसाको विषयलाई लिएर शान्ताक्रुजको घरमा झगडा भएको थियो । सोहीक्रममा कोहलीले उनलाई..
अविवाहित छिन् ३६ वर्षीया यी अभिनेत्री, विवाह बिनै बच्चा जन्माउने योजना
एजेन्सी, २१ जेठ टेलिभिजन कलाकार शमा सिकंदरले दुई वर्ष पहिले एक व्यापारीसँग इन्गेजमेन्ट गरेकी थिइन्। त्यसपछि दुबैले चाडै विवाह गर्ने फैसला गरेका थिए, तर विवाह भएन्। हालै शमाले एक अन्तरवार्तामा यस बारेमा कुरा मुख खोलेकी छन्। उनले भनेकी छन्, हामीले विवाहको धेरै योजना बनायौ, तर ठोस नतिजामा पुग्न सकेनौँ। म र जेम्स दुबैले विवाहमा धेरै विश्वास गर्दैनौँ। हामी जीवनमा मस्ती गर्ने कुरामा..
एजेन्सी, २० जेठ सोनाक्षी सिन्हा, जो बलिउडमा आउनुअघि ‘हिरोइन’ जस्ती थिइनन् । उनको शरीर अस्वभाविक मोटो थियो । तर, सलमान खानले उनलाई आफ्नो होम प्रोजेक्ट ‘दबंग’का लागि अफर गरे । ९० केजी तौलकी मोटी सोनाक्षीले आफुलाई हिरोइनमा रुपान्तरण गर्न शरीरको थुप्रै बोसो पगालिन् । उनले करिब ३० केजी तौल घटाइन् । र, हिरोइनको लागि फिट भइन् । अनि यसरी पर्दापण भइन्,..
आफ्नो श्रीमती करिना कपुरको ड्रेस देखेर किन भड्किए सैफअलि खान ?
एजेन्सी, १८ जेठ अभिनेत्री करिना कपुर ड्रेसअपको मामलामा निकै चलाख छिन् । कहाँ जाँदा कस्ता ड्रेस लगाउने भन्ने कुरा उनलाई कसैले सिकाइरहनुपर्दैन । त्यति मात्रै होइन, उनले जस्तो ड्रेस लगाए पनि कसैले हस्तक्षेप नगर्ने गरेको खबर आउने गरेको छ । यतिसम्म कि सैफअलीले समेत करिनालाई ड्रेसअपका मामलामा स्वतन्त्र छाडेको बताइने गरिएको छ । तर, अहिले कुरा अर्कै आएको छ । सैफले करिनाले लगाएको..
प्रियंका चोपडाको हलिउड मोह, अभिनेता तथा गायक निक जोनास् उनको नयाँ प्रेमी !
एजेन्सी, १७ जेठ बलिउड हुँदै हलिउड सम्म आफ्नो प्रभाव जमाउन सफल नायिका प्रियंका चोपडा नयाँ प्रेमीको कारण अहिले चर्चामा छिन् । हालै प्रियंकाको सार्बजनिक एक भिडियोमा आफ्नो ब्वाइफ्रेन्ड निक जोनसका साथमा देखिएकी छिन् जसको बारे अहिले चर्चा परिचर्चा हुन थालेको छ ।प्रियंका आफनो प्रेमी निकका साथ बेस बल स्टेडीयममा सँगै देखिएकी छिन् यसअघि पनि उनि निक सँगै विभीन्न कार्यक्रमहरुमा सँगसँगै भेटिएकी..
दीपिका पादुकोण ‘सुपर हिरो’ फिल्ममा देखिंदै, फिल्मको बजेट तीन सय करोड हुने !
एजेन्सी, १६ जेठ ‘पद्मावत्’पछि दीपिका पादुकोणको नयाँ फिल्म कुन होला भन्ने प्रतीक्षा उनका फ्यानहरूलाई हुनु स्वाभाविक हो । रणवीर सिंहसँग आगामी १९ नोभेम्बरमा विवाहको तयारीमा दीपिका जुटेको खबरले उनका फ्यान खुसी छन् । त्यसमाथि दीपिका थप फिल्म गर्ने अर्को खबर बाहिरिएको छ । तर, यो फिल्मबारे आधिकारिक पुष्टि भएको छैन । भारतीय मिडियाका अनुसार दीपिका ‘सुपर हिरो’ फिल्मका लागि अगाडि बढेकी छन्..
सैफ अली खानकी छोरी सारा अलि खानलाई पहिलो गाँसमै ढुंगा, ५ करोड क्षतिपूर्ति माग्दै मुद्दा !
एजेन्सी, १५ जेठ बलिउड अभिनेता सैफ अली खानकी छोरी सारा फिल्म ‘केदारनाथ’ बाट बलिउडमा डेब्यू गर्दैछिन् । तर, उनलाई पहिलो गाँसमै ढुंगा जस्तो भएको छ । सो फिल्मका निर्देशक अभिषेक कपुरले सारालाई अदालतमा तानेका छन् । साराले फिल्मका लागि गरेको सम्झौता अनुशरण नगरेको उनको आरोप छ । अभिषेकका अनुसार साराले केदारनाथका लागि जुनसुकै डेट दिन आफू तयार रहेको भनेर कन्ट्राक्ट साइन गरेकी..
एजेन्सी, १४ जेठ भारतीय कमेडियन कपिल शर्मा कमेडी नाइट विथ कपिलका कारण चर्चामा आएका कलाकार हुन् । चर्चाकाे शिखरमा पुग्दै गर्दा कपिल आफ्नै सहकर्मीहरुसँगको झगडा पछि विवादमा मुछिएका थिए । विवादमा मुछिए लगत्तै उनकाे शाे पनि बन्द हुन् पुग्याे । पछिल्लोपटक उनले ‘फेमिली टाइम विथ कपिल’ लिएर सोनी टेलिभिजनमार्फत कमब्याक गरेका थिए । उक्त शाेमा पनि चर्चित नायिका रानी मुखर्जीलाई बोलाएर आँफै अनुपस्थित बनेपछि उनी..
काठमाडौँ, १३ जेठ मिथिला चित्रकलाका क्षेत्रमा पुनमकुमारी दासको पहिचान छुट्टै छ । बत्तीय वर्षीया दास मिथिला चित्रकलामा आफू अब्बल भएको जिकिर गर्छिन् । रासससँगको कुराकानीमा उनले भने, “महिलालाई विशेष गरी आफ्नो काममा अघि बढ्न परिवारको साथ हुनु एकदमै आवश्यक हुन्छ ।” विवाहपछि श्रीमान्ले नै आफूलाई व्यावसायिक रुपमा आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न सफल गराएको उनले बताईन् । भारतको मधुवनी जिल्ला, विहारमा जन्मनुभएकी दासको १४ वर्षका..
युट्युब ट्रेन्डिङको नं १ मा सपूतको वेदनामा आधारित लोकगीत ‘बोल माया’ (भिडियो सहित)
बागलुङ, १० जेठ : विदेशमा प्रियजन गुमाउने नेपाली परिवारको वेदनामा आधारित लोकगीत ‘बोल माया’ अहिले चर्चामा छ । बागलुङका सर्जक प्रकाश सपूतले निर्माण गरेको उक्त गीत अहिले युट्युबमा सर्वाधिक हेरिएकोमध्ये नम्बर १मा छ । सार्वजनिक भएको छ दिनमै उक्त गीत नेपालमा १२ लाखभन्दा बढी पटक युट्युबमा हेरिएको छ । धेरैपछि नेपाली लोकगीत ‘युट्युब टे«डिङ’ को १ नम्बरमा आएको छ । सामाजिक विषयवस्तु,..
अभिनेता राम कपुरले भने: ‘सलमान खानसँग तुलना गर्नुअघि आफूलाई गोली हान्छु’
एजेन्सी,१० जेठ ‘सलमान खानसँग तुलना गर्नुअघि आफूलाई गोली हान्छु’ यो भनाई हो अभिनेता राम कपुरको । उनले सो कुरा एक भारतीय मिडियासँगको कुराकानीमा भनेका हुन् । राम कपुर चाँडै नै आफ्नो नयाँ कार्यक्रममार्फत टेलिभिजनमा फिर्ता हुँदैछन् । उनी सोनी टेलिभिजनको कार्यक्रम ‘जिन्दगी के क्रसरोड्स’ मा देखिनेछन् । उक्त कार्यक्रम ६ जूनमा अनएयर हुनेछ । यस्तै, उक्त च्यानलमा सलमान खानको कार्यक्रम ‘दसका दम’..
काठमाडौँ, ८ जेठ सदाबहार अभिनेत्री करिश्मा मानन्धर यस वर्ष एसईई परिक्षा दिँदैछिन् । मैतिदेवीको ग्यालेक्सी पब्लिक स्कूलमा गत वर्षदेखि अध्ययन सुरु गरेकी उनी आफू स्कुले विद्यार्थी भन्न रत्तिभर हिचकिचाउँदिनन् । अभिनयसँग-सँँगै पछिल्लो समय डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टीमा समेत आबद्ध उनलाई निकै कमले स्कुलको ड्रेसमा देखेका छन् । सोमवार भने उनी सार्वजनिक कार्यक्रममा नै आफू अध्ययन गरिरहेको विद्यालयको पोषाकमा उपस्थित..
विवाहपछि नेहा धुपियाको बोल्ड फोटोसुट, बाथटबमा देखियो कामुक अवतार
एजेन्सी, जेठ ६ हालै बलिउड नायिका नेहा धुपियाले आफ्ना प्रेमी र नायक अंगद बेदीसँग अचानक विवाह गरेर सबैलाई चकित पारिदिइन् । विवाहपछि उनले पहिलो फोटोसुट गराएकी छिन् । यो फोटोसुट उनले ‘म्याक्जिम’ का लागि गराएका छन् । यसपटक उनी म्यागजिनको कभर गर्ल बनेकी छिन् । अहिलेसम्म तीन भिन्न भिन्न तस्बिरमा उनको हट र बोल्ड अन्दाज देखिएको छ । तीमध्ये एकमा उनी बाथटबमा देखिएकी..
भद्दा जोकमा खित्खिताएर हाँस्दा ट्रोलको सिकार भइन् कंगना !
एजेन्सी, जेठ ४ बलिउडका केही नायिकाहरु फ्रान्समा आयोजित कान्स फिल्म फेस्टिबलमा खुबै छाए । खासगरी उनीहरुको पहिरनको चर्चा भयो । तर, सोही फेस्टिबलमा पुगेकी नायिका कंगना भने विवादमा परेकी छिन् । उनको एउटा भिडियो भाइरल भइरहेको छ, जसलाई लिएर भारतीयहरुले उनलाई ट्रोल गर्न थालेका छन् । यो भिडियोमा कंगनालाई एउटा भद्दा जोक सुनेर खित्खिताउँदै हाँसिरहेको देखिन्छ । कंगना अभिनेता जिम सरभसँग गफिइरहेकी हुन्छिन्..
एसईईको तयारीमा जुटेकी करिश्मा यस्ती देखिईन् स्कुले पोशाकमा !
काठमाडौं, जेठ ३ नायिका करिश्मा मानन्धर यति खेर एसईई परीक्षाको तयारीमा छिन् । अभिनय यात्रामा लागेर अपुरो रहेको आफ्नो अध्ययन पुरा गर्नका लागि उनी यतिखेर लागि परेकी छन् । १४ वर्षको उमेरमा ८ कक्षा पढ्दापढ्दै पढाई छाडेर अभिनयमा लागेकी करिश्मा ४४ वर्षको उमेरमा विद्यालय भर्ना भएर आफ्नो पढ्ने रहर पूरा गर्दैछिन् ।करिश्माले मैतिदेवीस्थित त्रिवेणी स्कुलमा कक्षा १०मा अध्ययन गरिरहेकी छिन् । फिल्म..
संजय दत्त पुत्री त्रि‍शाला दत्तको बोल्ड तस्वीर इंस्टाग्राममा भयो निकै भाईरल ! हेर्नुहोस् ...
मुम्बई, जेठ २ बलीउड अभिनेता संजय दत्तको छोरी त्रि‍शाला दत्तले फिल्मी दुनीयामा पाईला टेकेकी त छैनन् तर उनको सोसल मीडियामा चर्चा कुनै फिल्मी स्टारको भन्दा कम छैन । हालै त्रि‍शाला दत्तले समर लुक्स्को एक तस्वीर इंस्टाग्राममा शेयर गरिन जुन तस्वीर निकै भाईरल भयो । त्रिशालाको यस बोल्ड तस्वीरबारे संजय दत्तकी पूर्व पत्नी रिया पिल्लईले पनि आकर्षक र राम्री देखीएको प्रतिक्रिया दिएकी छन्..
निकै रुखो छ करिना कपुरको स्वभाव, गरिन् यी चर्चित नायक समेतलाई दुर्व्यवहार
काठमाडौं, जेठ १ बलिउडमा इन्ट्री मार्ने वित्तिकै सफल बन्नेहरु कमै हुन्छन् । त्यसमा पनि इन्ट्रीकै लागि पनि संघर्षरत कैयन कलाकारहरु त्यसै हराएर जान्छन् । त्यस्तै एउटा कलाकार जो बलिउडमा इन्ट्री मारेको धेरै समय भैसक्यो तर जम्न भने सकेका छैनन् । अझ अहिले त नायिकासँग जोडी नमिलेको भन्दै फिल्मबाट निकालिए । निर्माता निर्देशक करण जोहरले निर्माण गर्न लागेको फिल्ममा नायिका करिना कपुरको जोडी..
काठमाडौँ. बैशाख ३१ हरेक वर्ष १३ मेका दिन बलिउड अभिनेत्री सन्नी लियोनी जन्मदिन मनाउने गर्छिन् । यस वर्ष सन्नीले आफ्नो ३७औँ जन्मदिन मनाएकी छन् । सन्नीले एउटा मान्छेले जीवनमा कमाउन सक्ने नाम, दाम सबै कमाएकी छिन् । एक पोर्नस्टारका रूपमा स्थापित परिचय र विगतलाई त्यागेर उनी अगाडि बढिरहेकी छन् । पछिल्लो समय सन्नी आफ्नो जीवनकथामा बनेको फिल्म ‘करणजित कौर– द अनटोल्ड स्टोरी..
विश्व सुन्दरी बलिउड नायिका ऐश्वर्या रायको ‘कान्स’ मा यस्तो पहिरन !
काठमाडौं, ३० बैशाख विश्व सुन्दरी बलिउड नायिकाकाे चर्चा समय समयमा खुबै हुने गरेकाे पाइन्छ । अझ भनाै हरेक बर्ष आयोजना हुने ‘कान्स फिल्म फेस्टिभल’ मा उनको पहिरनले चर्चा र आलोचना दुबै पाउने गरेको छ । यो बर्ष पनि ‘कान्स फिल्म फेस्टिभल’ मा सहभागि भएर उनले आफ्नो स्टाइल, मेकअप र बोल्ड पहिरनका कारण चर्चा कमाएकी छिन्। महोत्सवको दिन बेलुकी उनले मिसेल सिनको ‘स्लिवलेस..
बलिउडका सबैभन्दा धनी १० हिरोइन जसलाई ‘बलिउड रिचेस्ट क्वीन’ भनेर पनि चिनिन्छ
काठमाडौं, २८ बैशाख बलिउडको व्यापार कैयौं देशमा फलिएको छ र यहाँ काम गर्नेहरु निकै सुविधासम्पन्न जीवन बाँच्छन् । यद्यपि बलिउडमा आएका कैयौं कलाकारमध्ये केही सुपरस्टार बने भने केही फ्लप भएर अर्कै काममा लागे । आज कुरा गरौं बलिउडका सबैभन्दा धनी हिरोइनको बारेमा जसलाई ‘बलिउड रिचेस्ट क्वीन’ भनेर पनि चिनिन्छ । १। अमिषा पटेलः ब्लकबस्टर फिल्म गदर एक प्रेम कहानी बाट डेब्यू गरेकी..
हजुरलाई के लाग्छ! मोडलकोलागि अनुहार नै सबै कुरा हो ? त्यसोभए क्यानेडियन मोडल विन्नी हार्लोलाई हेर्नुहोस्
काठमाडौँ, वैशाख २७ भिटिलिगो, लुकोदेर्मा अर्थात् दुबी रोग भएकी विन्नी हार्लो हालै न्युयोर्कमा आयोजित मेट गालाको रेड कार्पेटमा पहिलो पटक हिँडेकी छन् । मोडलिङका लागि अनुहार नै सबै कुरा हैन भनेर क्यानेडियन मोडल विन्नी हार्लोले प्रमाणित गरेकी छन् । उनी विश्वका टप मोडलहरूको लिस्टमा पनि अग्रपंक्तिमा पर्छिन् । न्युयोर्कको राम्रो फेसन इस्टिच्युट मानिने मेट गालाले प्रत्येक वर्ष फेसन एग्जिबिसन गर्दै आएको छ,..
बलिउडको सबैभन्दा ठूलो विवाह! आनन्द आहूजा र सोनम कपूरको लगनगाँठो कसियो
एजेन्सी, बैशाख २६ बलिउड अभिनेत्री सोनम कपूर र उद्योगपति आनन्द आहूजाको विवाह मंगलवार सम्पन्न भएको छ । बुधबार साँझ मुम्बईमा यी दुईको रिसेप्शन हुँदैछ । रिसेप्शन मध्यरातसम्म चल्ने भारतीय मिडियाले खबर छापेका छन् । यो यस वर्ष बलिउडको सबैभन्दा ठूलो विवाह हो । डार्क बेज रंगको नेहरू कलर शेरवानीमा आनन्दको परफेक्ट ग्रूम स्टाइल देखिएको छ । शेरवानीमा रूबीज बीडि‍ड ग्रूम ज्वेलरीमा आनन्द,..
Results 913: You are at page 24 of 31